China abakhiqizi bebhakede le-Mixer nabaphakeli Imishini ye-Dongheng
Izici zebhakede lethu lokuxuba
I-KINGER mixer ibhakede linamamodeli ama-2 afanele i-skid steer ne-backhoe Loader njll.
IBERER mixer ibhakede lisebenzisa ama-multistage seal endaweni lapho livimbela khona odakeni.Ngale ndlela, isikhathi sokuphila esizothatha isikhathi eside.
Ngokuvulwa komfutholuketshezi ezansi kwebhakede lokuxuba kanye nepayipi lokukhipha elitholakalayo, uzoba namandla okulawula i-maxium kalula kuthela ngalinye.
Gqoka IZINTO EZIMELAYO
Ibhakede nensimbi evuselelayo yenziwe ngezinto ezinamandla okugqoka, okwenza kube nzima ukugqokwa ngesikhathi sokusebenza.
Amaphayiphu wokulawula ikhwalithi ephezulu namakhithi wokuxhuma kagesi ngaphakathi enza ibhakede le-KINGER lokuxuba likhombisa ukusebenza kahle ekukhiqizeni umsebenzi oqinile.
I-KINGER Concrete Mixer Bucket okunamathiselwe kalula kususa ubunzima ekukhiqizeni umsebenzi oqinile, ofika ngosayizi ababili ukonga isikhathi sakho somsebenzi nemodeli yethu ekwazi ukuxuba nokuhambisa ukhonkolo ofinyelela ku-300L umthwalo owodwa. i-adaptha ipuleti eboshiwe ukulingana noma imiphi imikhiqizo skid steer.As kuya backhoe Loader, singenziwa njengosayizi wakho ukulingana umshini wakho.
Ngenhla ukucaciswa kwebhakede lethu lokuxuba kusethenjwa sakho.Ingakhwela kuwo wonke ama-skid steer kanye ne-backhoe loaders.Yimiphi imibuzo eyamukelekile ukuxhumana nathi.
Langaphambilini Isihleli sesiphunzi
Olandelayo: Umhlaba auger